Pharmaceutical Zvirimwa HVAC Solution
Mishonga yemishonga inotsamira pakuitwa kwemakamuri akachena kuona kuti zvakakosha zvigadzirwa zvigadzirwa zvinowanikwa. HVAC masisitimu mukugadzira zvikamu zvezvivakwa zvemishonga zvinotariswa zvakanyanya nehurumende agency. Kukundikana kutevedzera chero chehunhu hunodiwa kunogona kuisa muridzi pane zvese zviri pamutemo uye bhizinesi panjodzi. Naizvozvo zvakakosha kuti zvivakwa zvemishonga zvivakwe pasi peyakaomarara uye yakanyatsotsanangurwa mhando-yekudzora system. Airwoods dhizaini, inovaka uye inochengetedza yakasimba HVAC system uye cleanroom inosangana neyakaomarara kudiwa kunoenderana kune mishonga mishonga zvivakwa.
HVAC Zvinodikanwa zveMishonga
Yemukati yemhando yemhepo inodiwa mumishonga yemishonga, kusanganisira humidity kudzora uye kusefa ndeimwe yeakanyanya kuomesa chero ekushandisa application. Imwe yenzira dzakakomba zvikuru kufefetedza kwakakodzera. Nekuti iro rekutanga chinangwa chiri kudzora zvinosvibisa mukugadzira uye nekutsvaga nzvimbo, guruva nehutachiona ndizvo zvinogara zvichityisidzira mukati mezvivakwa izvi, zvinoda hurongwa hwakanyatsogadzirwa hwekusefa uye kufefetedza kunoomerera kune yakasimba mweya yemhando yepamusoro (IAQ) zviyero uye zvinobatsira kudzikisira kusangana nezvirwere zvinofambiswa nemhepo uye zvinosvibisa.
Pamusoro pezvo, nekuti mishonga yemishonga inoda kugara ichishanda, inodzora mamiriro ekunze, zvakakosha kuti iyo HVAC system igare zvakakwana kuti ishande nguva dzose, asi ichishanda zvakakwana kuchengetedza simba remagetsi zvakaderera sezvinobvira. Chekupedzisira, nekuti nzvimbo dzakasiyana dzezvivakwa dzinenge dziine yavo yakasarudzika yekufefetedza uye tembiricha inoda, iyo HVAC sisitimu inofanirwa kugadzirirwa kuti ienderane neakasiyana ekudzora mamiriro ekunze anodikanwa munzvimbo dzakasiyana dzeichi chivakwa.
Solid Mishonga Fekitori
Liquid Mishonga Fekitori
Kuzora Mishonga Fekitori
Upfu Mishonga Fekitori
Kupfeka Uye Patch Chemishonga Fekitori
Chiremba Chigadzirwa Mugadziri
Yedu HVAC mhinduro, yakasanganiswa Ceiling Systems, uye Gadzirisa Yakachena imba yekubatsira kusangana nezvinetso zvakaomarara zvemishonga yekugadzira indasitiri, inoda zvinomomarara uye zvine utachiona kudzora.
Isu tinoita ongororo izere yezvinodiwa nevatengi vedu uye tinopa yakazara dhizaini inotora account mune yekugadzira maitiro, zvishandiso, mhepo yekunatsa yekuchenesa, kupa mvura uye drainage, zvirevo zvehurumende nemirau.
Zvekugadzira mishonga, kugadzirwa uye kugona zvigetsi zvihombe zvekubudirira. Dhizaini dhizaini ichave inonzwisisika uye inowirirana zvinoenderana nezvinodiwa muitiro wekugadzira, unoenderana nebasa rekugadzira uye unovimbisa manejimendi anoshanda enzira yekugadzira.
Kune yekuchenesa mweya system, pane maviri akakosha mazano. Imwe yakanaka kumanikidza kudzora kudzivirira kukanganisa kwemweya wekunze pane zvakatipoteredza; Uye isina kunaka kumanikidza kudzora kudzivirira kutapudzwa kwechetere kusvibiswa mune yekugadzira maitiro. Kunyangwe iwe uchida yakanaka mweya yekumanikidza kana isina kunaka mweya yekumanikidza yekuchenesa, ane ruzivo cleanroom kugadzira uye muparidzi, senge Airwoods, inogona kuve nechokwadi dhizaini, kuvandudza, uye kuendesa mhinduro inogutsa zvaunoda. KuAirwoods, nyanzvi dzedu dzine ruzivo rwakakwana rwekushanda kweiyo yese yekuchenesa dhizaini uye maitiro ekuvaka, kubva kuzvinhu zvekuchenesa uye maitiro akanakisa kuenda kumidziyo yeHVAC inodiwa pamhando dzakasiyana dzekushandisa.
Bolivia Chemishonga Fekitori
Cambodia Chemishonga Chekuchenesa Chirongwa
Bolivian Mishonga Yekuchenesa Purojekiti